China Silver ntekwasa spandex conductive / echebe ákwà na-emepụta na suppliers | 3L Tex
Silver ntekwasa polyamide conductive / echebe ákwà
Uwe ọla ọcha na Spandex (nje nje antibacterial / igbu)
igwe anaghị agba nchara filaments yarn / eri
igwe anaghị agba nchara eriri tube / sleeving / eriri
Igwe anaghị agba nchara kpara tube / sleeving
igwe anaghị agba nchara nchara tubing / sleeving
igwe anaghị agba nchara eriri teepu / belting
Igwe anaghị agba nchara eriri ákwà
Arọ: 110g ± 5g
Ọgwụgwọ dị: Ọgwụ igbochi ọgwụgwọ
Min.Order ibu: 120M
Main Akụkụ: Oké ala na-eguzogide, na-echebe electromagnetic ebili mmiri, mgbochi radieshon, antibacterial, deodorant (ajụ), kpochapụ static ọkụ eletrik, muscle na-akpali akpali, mezie ahu okpomọkụ, mgbochi UV, eke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, elu ikuku permeability
Dị ọcha ọlaọcha ntekwasa polyamide spandex akwa
The kacha mma conductive echebe ákwà na antibacterial ọrụ, ọlaọcha ntekwasa na polyamide / naịlọn spandex isi ihe onwunwe, ọ bụ ihe na-eyi na-eguzogide ọgwụ, ịgbatị, adụ na ala. Ọ bụ a elu-tech ngwaahịa nwetara site na-adịgide adịgide bonding ọlaọcha na naịlọn ihe onwunwe site a pụrụ iche elu Usoro. Ihe owuwu a anaghị eme ka eriri ọlaọcha nọgide na-enwe ihe onwunwe nke textile mbụ, kamakwa ọ na-enye ya ọrụ anwansi niile, mmetụta nke ọlaọcha. Dị ka ezigbo ihe okike, ọlaọcha zuru oke, gburugburu / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ịchekwa.
Main Njirimara: Nnọọ ike nguzogide, na-echebe electromagnetic ebili mmiri, mgbochi radieshon, antibacterial, deodorant (ajụ), kpochapụ static ọkụ eletrik, akwara na-akpali akpali, mezie ahu okpomọkụ, mgbochi UV, eke green, elu ikuku permeability, keosusu / recyclable. , arụmọrụ nchebe dị elu.
Main Ngwa: Ihe zuru oke maka ọta, mgbochi radieshon, uwe ime uwe, uwe, ngwa na akwa textiles, uwe mgbochi nje, ihe nkpuchi, uwe aka na akwa ụlọ, ngwaahịa ọgwụ, egwuregwu, uru anụ ahụ, ngwaahịa na-eduzi, ngwaahịa mgbochi.
Ugboro ugboro na echebe ihe:
Ogologo oge: 9KHz-40GHz
Shield irè: 50.0dB-71.0dB
Iguzogide ihu: 0.2 Ohm / cm
Usoro mgbochi ikpuchi ikpuchi mmiri:
Ọlaọcha na-eduzi nke ọma ma nwee ọta mkpuchi electromagnetic. Mgbe ndị mmadụ na-eyi uwe mgbochi akwa / uwe / ngwa iji kpọtụrụ akụrụngwa eletriki, uwe mgbochi electromagnetic nwere ike ịme ngwa ngwa electromagnetic ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma, si otú ahụ na-echebe ahụ site na ebili mmiri electromagnetic.
Antibacterial Udi: nje virus nke oria iku ume bu oria - Uzo-19, H1N1, Flu, candida albicans, staphylococcus Aureus, eschenchia coliform wdg.
Kpụrụ: Ngwurugwu ọla ọcha na-ewepụta ion ọlaọcha nke ga-ewepụ protein enzyme n'elu nje bacteria na microorganisms ndị ọzọ, si otú ahụ na-ebibi usoro nke nje bacteria, na-emetụta ndụ ya, na iru nzube nke antibacterial.
Ion ion ọla ọcha nwere ike igbu nje 99,99% nke oria iku ume, Covid-19, H1N1, flu na nkeji. Ihe nlere ahụ sitere na Institute of Microbiology na Epidemiology nke Academy of Military Medical Sciences na-egosi na akwa antiviral nwere ike igbu ma ọ bụ gbochie influenza A na nje virus na obere oge.
Mmprove mgbasa ọbara: Silver fiber nwere ike ịkwalite microcirculation, mmiri na ọsụsọ absorption, nwere ike n'ụzọ dị irè ka mma mgbasa ọbara. Igwe sọks antibacterial na-egbu ume, ikpere ikpere, ndị agha (Maka Varicose veins, ọrịa shuga, ogbu na nkwonkwo)
Akwara Na-akpali akpali: maka ọgwụ na-akpali akpali electrode, akwara na-akpali akpali na mma.
Smart /ọgụgụ isi ihe mmetụta Produts:
Na àjà ihe ọ highụ highụ dị elu nke ọma, a na-eji akwa ọlaọcha anyị eme ihe na ngwaahịa ndị nwere ọgụgụ isi, uwe ime, uwe, ngwa na ngwa ụlọ.
Nke gara aga: Polyester Taffeta Agba Ọla kọpa Conductive Fabric
Osote: Silver ntekwasa polyamide conductive / echebe ákwà
Silver ntekwasa conductive / echebe ákwà
Ihe eji ekpuchi ọlaọcha na ntanetị
Mkpịsị ọlaọcha (nje nje antibacterial / igbu)